Ku laabashada Roots | Buddhatrends Logo
Qeyb weyn oo ka mid ah sameynta calaamad waa geedi socodka naqshadeynta calaamad muujinaysa dhamaan qiimaha shirkadda. Magaca laftiisa, calaamaddu waa inay sheegto sheeko. Sheeko si sahlan loo xusuusto oo si qoto dheer loogu xiro sawirka yar ee muhimka ah ee muhiimka ah ee wax kasta oo aad u baahan tahay inaad sheegto. Ka dib hadalo badan iyo talooyin ka yimid macaamiisheena qaaliga ah, waxaan go'aansanay in "dib u laabasho" ay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu hormarin karo calaamad iyo horumarin mustaqbalka.
Tan iyo markii la abuuray calaamadeena, waxaan ujeedkeennahay in aan gaarno ujeedooyin waxaanan dooneynaa inaan abuurno wax u gaar ah dumarka oo dhan. Isbeddelka ku yimaada dhinaca xididdada Buddhatrends ayaa halkan u taagan in la calaamadiyo bilow cusub. Sida quruxda oo ka soo baxda dambaska, si la mid ah, waxaanu dooranaynaa inaan dib u soo celino astaanta asalka ah.
Iyaga oo leh caleenta cagaaran iyo orange, waa isku-dheelka ugu fiican ee farxadda, diirimaadka, qorraxda, iyo xamaasadda si isku dheelitiran oo udhexeeya midabada dhulka, qoryaha, farsamada, iyo xasilloonida. Midabada ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu sharxi karo sheekada waxaan isku deyeyneyno dharka aan bixino.
Waxaan sidoo kale dooneynaa inaan fursaddaan ka faa'iideysano inaan kuugu mahadnaqno kalsoonidaada, taageeradaada iyo ganacsigaaga nooca wanaagsan.
Qoraalkani, waxaan kuu rajeyneynaa Nabad, jacayl iyo farxad.